Amakhaya Oncedo Kwa-Airbnb
Amakhaya Oncedo aza kuba nguAirbnb.org
Inkqubo ka-Airbnb Yamakhaya Oncedo ngoku itshintshele ekubeni nguAirbnb.org, umbutho ongenzi nzuzo omtsha oyi-501(c)3. Enkosi ngokwenza kunye nathi intsapho Yamakhaya Oncedo. Siza kuvuyela kakhulu ukuba ube yinxalenye yesi siqalo sitsha.
Yenza okulungileyo ngokuvula ikhaya lakho
Joyina intsapho yababuki zindwendwe abanezinwe. Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.
okanye unikele ukuze ubhatalele irenti
Abantu abangaphezu kwe-50 000 baye bafumana iindawo zokuhlala ngenxa yababuki zindwendwe Bamakhaya Oncedo.
Indlela okusebenza ngayo ukubuka iindwendwe
Sixelele okungakumbi ngendawo yakho nesizathu sokuba ufuna ukubuka iindwendwe
Uza kufumana imilayezo evela kwimibutho engenzi nzuzo okanye kubantu abafudusiweyo
Lungela ukubuka iindwendwe
Uza kuvuma iintsuku uze ubeke izinto emazilindelwe kwangaphambili
Indlela onokubuka ngayo iindwendwe
Ukunika iimbacu indawo yokuhlala
Yamkela abantu abafikayo njengoko bezama ukuqhelana neendawo zabo ezintsha
Ezi ndwendwe zidla ngokufudukela kwisixeko esitsha ngethemba lokuba ziza kwamkeleka ekuhlaleni. Ezi ndawo zokuhlala zilawulwa yimibutho yokunceda iimbacu egameni lemibutho esebenzisana nayo.
Ukunikezela uncedo ngexesha lentlekele
Yiba yinxalenye yabantu basekuhlaleni abakwizicwangciso zokusabela xa kwehle intlekele
Aba bantu badla ngokuhlalela iziganeko ezifana nemililo yedobo okanye xa inkanyamba intlitha abahlali. Iindwendwe zidla ngokuba ngabantu ekuye kwanyanzeleka ukuba bafuduke okanye ngabantu abazokunikela uncedo.
Uhlolisiso oluthe chatha
Nangona kungekho nkqubo yokuhlolisisa engenazimpazamo, siye sihlole abameli beenkampani zokubhukisha kunye neendwendwe ezibhukisha ngokungqalileyo zisebenzisa uAirbnb, kuludwe lwabasemiqathangweni, lwabagrogrisi kunye nolwabantu abamele baqatshelwe.
Izinto ezifunwa ziindwendwe kunye nezinto zokuqinisekisa
Ngaphambi kokunikezelwa kwendawo, abantu abasebenzela imibutho engenzi nzuzo okanye iimbacu kufuneka bavule i-akhawunti ye-Airbnb. Baza kucelwa ukuba bafake iinkcukacha zobuqu njengegama nefani, umhla wokuzalwa, ifoto, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile kunye neencukacha zendlela yokubhatala.
Abantu esisebenza kunye nabo
Siye sabambisana nemibutho ethembekileyo ukuze siluqonde kakuhle uluntu esilusebenzelayo nokuba singaphucula njani. Le mibutho engenzi nzuzo isebenzisa ijelo elithi Amakhaya Oncedo ukufunela abantu bayo indawo nokuxhasa ababuki zindwendwe bayo.
Ngaba umbutho wakho ongenzi nzuzo ufuna ukusebenzisana nejelo elithi Amakhaya Oncedo? Sithumelele umyalezo.